I-Articulars Der, i-Das, i-Die Video Course
Izindatshana zaseJalimane, der, das, die articles Isifundo sethu sevidiyo saseJalimane. Kulesi sifundo, sizohlola i-Artikeller yaseJalimane, okungukuthi iDer, iDas, iDie.
Isihloko se-artikel ngokuvamile siboniswa njengenye yezihloko ezinzima kakhulu kubafundi baseJalimane.
NgesiJalimane kunenye yamagama ama-isimler der, das, die denilen abizwa nge-ik artikel önünde phambi kwawo wonke amagama ubulili.
I-Der, das, artikels die ezithile (emihle) izindatshana zamaJalimane.
Ba phambi kwamagama onke namagama (okusho amagama) kufanele abanjwe ngekhanda kanye nezihloko lapho bekhanda ngekhanda.
Ngokuvamile i-der artikel i-genus yamadoda, i-artikeli ye-female genus, i-genus ye-neutral ifanekisela.
Amagama athi der, das and die awanawo amagama afana nesiTurkey futhi awanakuhunyushwa ngokuphelele olimini lwethu. Lawa magama anjengengxenye yegama akulo. Lapho ufunda igama, kuyadingeka ukuthi ufunde i-athikili yalo ndawonye njengokungathi yigama elilodwa elinegama.
Igama elithi i-athikili libizwa nge- "the" kweminye imithombo futhi njenge- "preposition preposition" kweminye.
Ngaphezu kwalokho, njengolwazi olungeziwe, ama-athikili afushanisiwe njengoba kukhonjisiwe ngezansi kwizichazamazwi nezinsizakusebenza eziningi. Sicela ugcine engqondweni izinhlamvu ezifingqiwe ezibonisiwe.
Izinto ezibonakalayo ziboniswa kwimithombo eminingi kanje:
Lokhu kuboniswa ngokusebenzisa izinhlamvu m noma r.
ukufa kuboniswa ngokusebenzisa izinhlamvu f noma e.
I-das iboniswa besebenzisa izinhlamvu ze-n noma z.
Kunezinhlobo ezimbili zamaqembu ama-athikili ngesiJalimane, okuyizindatshana ezithile nama-athikili angaziwa. Sizohlola la maqembu esigabeni esilandelayo.
Kuvidiyo esinikeze ekuqaleni kwesihloko sethu, ulwazi mayelana neziqephu zaseJalimane nokuthi kuphi kanye nokuthi izihloko zaseJalimane zisetshenziswa kanjani.